Ifenitshala yesitrato - iindlela zakutshanje zoYilo lweSixeko kunye neemveliso
Uyilo oluncinci liqela lezakhiwo ezincinci ezichaphazela kakhulu ukubonwa kwesithuba ngabasebenzisi bayo.
Kungenxa yokusebenzisa izinto ezikhethwe ngononophelo kulwakhiwo oluncinci apho indawo ephuhlisiweyo ithatha ubume, intetho kunye, ngaphezu kwako konke, iyasebenza.
Ifenitshala yesitrato ichaphazela indawo ejikelezileyo, kunye nohlaza kunye nezakhiwo, inegalelo kuyo ulungelelwaniso lweendawo.
Uyilo oluncinci lweedolophu lube loluphi umahluko kwizixeko.
Ecaleni kwento ebaluleke kakhulu, ilitye lesikhumbuzo okanye indawo, eyilwe ngononophelo uyilo oluncinci isenokuba yeyona nto iya kukhunjulwa ngabakhenkethi.
Iya kudityaniswa nesixeko esinikiweyo. Iya kubahlula kwibala lesizwe nelamanye amazwe.
Namhlanje, ukukhokelela, i-metropolises zanamhlanje ziyakhuphisana kwaye zibizwa ngokuba zezona zinomdla hayi kuphela kubakhenkethi, kodwa nakwabahlali, ekuthi ngokungathi ubume bendawo yoluntu ngokungathandabuzekiyo bubaluleke kakhulu.
Yenziwe kakuhle iibhentshi, sheds, iitafile, iimbiza zeentyatyambo kunye nezinto iindawo zokudlala banokuvuselela ngempumelelo indawo engummelwane, baphefumlele umoya omtsha kuyo, bayenze ikhetheke kwaye ibe nokubonakalisa.
Ngenxa yoko, abahlali kunye nabakhenkethi baya kuba sethubeni lokundwendwela.
Uyilo oluncinci lwedolophu- imisebenzi
Izinto ezikhethwe ngokufanelekileyo kwifenitshala yesitrato, ngendlela engabonakaliyo, nceda ukugcina kunye nokulungelelanisa imisebenzi yokusetyenziswa kwendawo.
Imizekelo emihle inokuba izithuba, kuthintela ukujikeleza kwetrafikhi iintyatyambo ngeentyatyambo.
Kwangelo xesha, benza umhombiso kwaye bathintela iimoto ukuba zingapakwa kwisixeko esingavumelekanga okanye bathintele ukufikelela kwi-promenade.
Omnye umzekelo wolu hlobo zizigqubuthelo zemithi, ezikhusela i-bark zazo, ukonakalisa umda, kunye nokuhombisa okhethekileyo.
Nangona kunjalo, ifenitshala yesitalato ingaphezulu kwayo yonke Ipaki kunye nefanitshala yesitrato.
Oku kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo iibhentshi.
Uluhlu olubanzi lwezisombululo luvumela ukusetyenziswa kwezinto ezihlanganiswe ngokugqibeleleyo kwimeko ejikelezileyo.
Eyona nto idume kakhulu ziibhentshi zokhuni, kodwa ngakumbi nangakumbi kukho iibhentshi zensimbi, kuwo nawuphi na umbala kunye nobume, kunye neebhentshi zobuchule zekhonkrithi, eziphantse zifane nomfanekiso oqingqiweyo.
Ukongeza kwiibhentshi, abasebenzisi bendawo yasezidolophini ngokuqinisekileyo baya konwaba kukusebenzisa ii-sunbeds, ezifanelekileyo ngokufanelekileyo kungekuphela nje kwi-boulevard, ngaselunxwemeni ngamanzi, kodwa nakwipaki, ejongene nemisebe yelanga.
Uyilo lweFomu yeSixeko
Inkampani ngumhambisi ophambili weemveliso zanamhlanje zefanitshala Uyilo lweFomu yeSixeko.
Isebenza ngqo kunye I studio zokuzoba kunye nabaqulunqi, ukwenzela ukuba bakhethe ezona ndlela zintle kunye nokusebenza kweempawu ezincinci zokwakha.
Ngapha koko, iyaxhasa Umbutho woYilo lweLizwe, ngokusebenzisana ngokuthe ngqo, kunye nokubonelela ngezisombululo kunye neemveliso zamva nje.
Uyilo lweQonga lesiXeko ngummeli okhethekileyo weenkampani ezigqwesileyo zase-Italiya ePoland - I-Metalco, I-Bellitalia yaye Uyilo lwesiXeko.
I-Metalco - intsimbi kunye neenkuni
Uyilo lweedolophu ezincinci sisihloko eyaziwa yinkampani yase-Italiya kakuhle I-Metalco.
Inika uluhlu olubanzi lweemveliso, ikakhulu kwezi ndidi zilandelayo: uyilo lwegadi encinci yaye kancinci uyilo lwedolophu.
Ukunikezelwa kweMetalco kubandakanya ezona zintle izisombululo ukulungiselela uphuhliso olusebenzayo kunye nokusebenza kweepaki, izitrato, igadi kunye nezikhululo.
I-Metalco ivelisa iibhentshi zepaki, iibhentshi zasegadini, izitulo zedolophu, izitulo zesitishi- zombini izitulo ezenziwe ngomthi nezenziwe ngentsimbi.
Ukongeza, ukuqinisekiswa kwale nkampani kubandakanya iibhasikiti zasesitratweni, iiposti, iibhodi zolwazi, iikhava zemithi, iibhloko zeentyatyambo, izitena zebhayisekile, izithinteli zelenzi kunye neendidi ezahlukeneyo zefanitshala yesitrato: izitena, ezifanelekileyo ipayinti, igumbi lokuhlala, kunye nepakini okanye igadi yesixeko.
I-Bellitalia - izinto eziphathekayo kunye namatye
I-Bellitalia yenye yeenkampani eziphambili zokwenza izinto zaseYurophu umda wekhonkrithi wedolophu kunye nelitye lendalo, eyaziwa ngezisombululo zayo yoyilo oluncinci kunye nobume bokwakhiwa komhlaba.
Inkampani isebenze ngaphezulu kweminyaka engama-40, ikwahlulahlula ngemveliso ekumgangatho ophezulu, inguqulelo yoyilo lwala maxesha.
Ifenitshala yesitrato ngaphakathi iiprojekthi Iinkampani ze-Bellitalia ngokuyintloko zipaki kwikhonkrithi ekhonkrithi, igadi kunye neebhentshi zedolophu. Iibhentshi zedolophu zihlala zisebenza ngendlela enye, zenza umfanekiso othile.
Ngapha koko, iBellitalia inikezela ngeendlela ezininzi zokutyala ikhonkrithi kunye namatye, kungekuphela zeentyatyambo ezizodwa okanye iibhedi zeentyatyambo, kodwa nemithi yokuhombisa.
Ukongeza, iBellitalia ikhethekileyo kwi ekudalweni kwemithombo, izithuba ezahlula okanye zithintela ukugcwala kwitrafikhi kunye neendawo zokudlala, kunye nemigqomo eqinileyo yenkunkuma eyenziwe ngekhonkrithi, ilitye okanye ilitye lokulinganisa.
Uyilo lwesiXeko - uyilo lwale mihla
Uyilo lwegadi encinci, iibhodi zokumisa, iibhodi zolwazi kwimibala yefashoni.
Iibhentshi zepaki zitsala umdla kuyilo lwale mihla. Izinto zokuhombisa, iimbiza zeentyatyambo, uthuli, iindawo zokukhusela iibhasi, okanye ukuthintela izithuba Ukugcwala kwendlela zezinye zeenkampani zokwakha izakhiwo zasezidolophini Uyilo lwesiXeko.
Umgangatho ophezulu weemveliso zoYilo weSixeko uqinisekiswa ngolawulo oluqhubekayo lwezixhobo kunye neenkqubo zetekhnoloji.
Ngele ndlela Uyilo lwesiXeko iyakwazi ukukuqinisekisa ngokuqina okuphezulu kweemveliso zayo, kunye nokuthobela imigangatho, ukhuseleko, i-ecology, aesthetics kunye nentuthuzelo yomsebenzisi.
izithinteli zothulitshixaiintyatyamboiibhasikithi zesitratoiibhentshi zesikhululoIibhentshi zeSixekoIibhentshi zegadiIibhentshi zeepakiPhosa iibhentshi zensimbiumsabalalisi omncinci wezakhiwouyilo lweedolophu ezincinciuyilo lwegadi encinciumthetho omncinci wokwakha izakhiwoumvelisi omncinci wezakhiwouyilo oluncinci egadiniifanitshala yesitalatoabalindi bomthiindawo yokudlalaizithubaiiracks zebhayisekileiibhodi zolwazi